भाउजु सुनिता र देवरको एउटै सारीको फेरमा लाश, कारण खुल्दा झनै चकित ! – PathivaraOnline
Home > समाज > भाउजु सुनिता र देवरको एउटै सारीको फेरमा लाश, कारण खुल्दा झनै चकित !
admin December 8, 2020 समाज	0
काठमाडौं । देवर र भाउजुको लाश फेला पारिएको छ । घटनाको सत्यता बाहिर आउँद गाउँले नै चकित बनेका छन् । भारत, उत्तर प्रदेशको फतेहपुर जिल्लाको गाजीपुरमा डरलाग्दो दृश्य देखिएको हो । त्यहाँको लोम्हटा गाउँमा एकै फन्दामा देवर–भाउजु मृत फेला परेका हुन् । परिवारले लामो समयसम्म ढोका नखुलेपछि आफैं खोले, तब दुबै लाश साडीमा घुमटिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । ***भिडियो हेर्न तला क्लिक गर्नुहोला***
प्रहरीका अनुसार लामो समयदेखि उनीहरुबीच देवर र भाउजुको सम्बन्ध नभई अरुथोक नै चलिरहेको थियो । उनीहरुबीच श्रीमान र श्रीमतीको जस्तो सम्बन्ध रहँदै आएको खुलेको छ । तर यो बीचमा परिवारले उनीहरुलाई अलग गर्नका लागि देवर चाँहीको विवाहको बारेमा तयारी गर्न थालेका थिए । आफुहरु सम्बन्धमा रहेको कुरा कसैलाई भन्न नसकेका उनीहरुले तब उनीहरुले यस्तो कदम उठाएको खुलेको छ । बान्द्रा जिल्लाको बबेरु थाना क्षेत्र बडौली कावात्रा निवासी रासिपालकी छोरी २८ वर्षीया सुनिताको विवाह २०१६ मा ब्राह्मणतारा गाउँका हरिओम निषाद छोरा शिवबरनसँग भएको थियो ।
जाफरगंजका सीओ सञ्जय शर्मा र एसओ कमलेश पाल घटनास्थल पुगेका थिए । एएसपी राजेश कुमारले भने कि दुवै जनालाई चेतावनी दिइएको थियो । राममिलनका बुबा शिवबरनले प्रेम प्रसंगको कारण जीवन विसाउन गर्ने प्रयास भनेका छन् । यसमा कसैले कसैलाई पनि आरोप लगाएको छैन । ***भिडियो हेर्न तला क्लिक गर्नुहोला***